Imandarmedia.com.np: जनप्रतिनिधिले काठमाडौं पुगेर गरे हुम्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता
Main News, Political » जनप्रतिनिधिले काठमाडौं पुगेर गरे हुम्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता
जनप्रतिनिधिले काठमाडौं पुगेर गरे हुम्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता
हुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै स्थानीय स्रोत साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर हुम्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
संवाद डबलीले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिमिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम लामाले स्थानीय साधन स्रोतको भरपुर उपयोग र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भोकमरी र हिउँको विषयलाई भन्दा अन्य विषयलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
सर्केगाडा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जोशी धामीले आवास, खानेपानी, सडक, विजुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुगेको बताउँदै जनतालाई सेवा दिन व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु लामाले आफ्नो गाउँपालिकाका जनतालाई चामल निर्भर भन्दापनि आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए । काठमाडौंबाट सिमिकोट टाढा भएजस्तै सिमिकोटबाट आफ्नो गाउँपालिका दुर्गम भएका बताउँदै लामाले स्वाथ्य, शिक्षका साथै कृषिलाई आधुनिकरण गरेर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए ।
ताँजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्ल स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । उनले हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालका साथै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर हुम्लीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने धारणा राखे ।
अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले सडक सञ्जालमा हुम्लालाई जोड्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आत्मनिर्भरताको लागि स्थानीय जल, जमिन र जंगल, जडिबुटीलाई उपयोग गरेर जनतलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको बताए । उनले आगामी चार वर्षसम्म हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी काम अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताए । अध्यक्ष फडेराले आफूलाई बाटो बिराए सर्तक गराउन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरे । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नलाई सडक हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिनुपर्ने बताए । स्थानीय उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरेर भोकमरीको अन्त्य गर्न सकिने बताए । त्यसैगरी चंखेली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला कुमारी शाहीले नयाँ संरचनापछि बनेको स्थानीय तहमा नयाँ संस्कार र संस्कृतिका विकास पहिलो प्राथमिकता रहेको बताइन् ।
उनले विगतको जनप्रतिनिधिहरुको संस्कार र संस्कृतिलाई नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, छुवाछुतको अन्त्य गर्ने बताइन् । त्यस्तै सिमकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बलि रावत र ताँजाकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु बुढाले पनि मतदाताको चाहनाअनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्यूरो सदस्य कर्णजीत बुढा ‘सुशिल’ले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले सुझाव दिए ।
पूर्व सभासद् समेत रहेका बुढाले चुनावको समयमा जनताको अगाडि गरेको प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न धारणा राखे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. गोपाल सिवाकोटीले भ्रष्टाचारबाट अलग रहेर जनताको हुम्ली जनतालाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अगाडि बढाउन सुझाव दिए । कुटनीतिक अध्ययन केन्द्र, नेपालका महासचिव डा. दीपेन्द्र रोकायाले भौगोलिक चुनौति भएपनि हुम्ला सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण भएको धारणा राखे ।
सम्भवना र अवसरको जनताको हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिए । संवाद डबलीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका रोकायाले स्थानीय तहको विकासको लागि गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्न जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिए । त्यस्तै सिप नेपालका अध्यक्ष अंगबहादुर लामाले जनतासँग गरेका वाचाअनुसार काम गर्न सुझाव दिँदै साथमा मिडियालाई लिएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । संवाद डबलीका सचिव धनन्जय बुढाले जनताको भावना तथा चुनावको बेला गरेको वाचाअनुसार काम गर्न सुझाव दिए ।
बुढाले स्थानीय तहमा पुरानै संस्कार र संस्कृतिको पुनरावृति भए मिडियाकर्मीको हैसियतले भण्डाफोर गर्ने बताए । सहभागी नेत्र महतारा, नरेन्द्र ऐडीलगायतले जनताको हुम्ला र हुम्लीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
२०७४ असार १४ मा प्रकाशित ।